Cabdiraxamaan Cabdishakuur: Ma ay oga laakiin Madaxda Federaalka iyagaa abuuraya kacdoon shacab – Kalfadhi
Cabdiraxamaan Cabdishakuur: Ma ay oga laakiin Madaxda Federaalka iyagaa abuuraya kacdoon shacab
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa ku tilmaamay hab-dhaqanka Xukumadda Soomaaliya mid abuuri doona wuxuu ugu yeeray “Kacdoon Shacab”, isaga oo dhahaya “yeysan cidna ku eedin”. Waxa uu Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ku eedeeyey in xal u raadinta dhibta amaan, dhaqaale, siyaasad iyo bulsho ee Soomaaliya haysata ay ka door bideyso iney maamulada Soomaaliya hogaamiyaan siyaasiyiin iyada taageersan oo kaliya.
“Ma ay oga, laakiin Madaxda Federaalka iyagaa abuuraya kacdoon shacab ee yaysan berri cidna ku eedin” ayuu Cabdiraxmaan ku yiri dhigaal uu kusoo qoray boggiisa. “Waxaa is waydiin mudan sababta markii Qatar safar loogu baxo, dagaal loogu qaado Dawlad Goboleedyada” ayuu sidoo kale yiri Cabdiraxmaan. Waxa uu ku eedeeyey dowladda in aysan dooneen in midnimo iyo wadajir lagu raadiyo xalka halista Soomaaliya haysata.
“Halkii ay Madaxda Dawlada Federaalka ahi ka raadin lahaayeen midnimo iyo wadajir, lagu wajaho cadawga gudaha ee xasuuqa wada iyo damaca debadda ee duudsiinta raba, waxay ku hawlan yihiin qaybinta shacabka iyo burburinta maamuladooda” ayuu yiri Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Taageerada ay Dowladda Qadar siiso Soomaaliya, Madaxweyne Farmaajo-na uu ka raadiyo, ayuu ku tilmaamay in ay xiriir la leedahay dagaal aan kala go’ lahayn, oo uu sheegay in ay DFS kula jirto Dowlad Goboleedyada. “Sow ma muuqato in ay mashruuc iyo qandaraas isla xariira tahay” ayuu yiri Warsame, isaga oo safarada uu Madaxweyne Farmaajo ku tagay Qadar iyo taageerada Dowladdaas ee DFS ku xiraya iney xiriir la leedahay sida ay DFS ula dhaqanto Dowlad Goboleedyada.
“Damiir damqanaya iima muuqdo hadii shacabka la gumaadayo oo hantidooda la burburinayo, gabdhahoodii lagu tacadinayo, dhulkoodii la damcayo ay ka muhiimsan tahay hebel aan bedelo oo mid aniga i raacsan ku bedelo” ayuu Cabdirxamaan Cabdishakuur ku yiri dhigaalkaas, waxaana hadalkiisa uu ku soo beegay ciidan la sheegay in ay DFS geysay Cadaado iyo Caabud-Waaq, kuwaas oo ay Galmudug ku tilmaantay “Xoog-ku-qabsasho Galmudug”.
Xildhibaan Xidig oo ku baaqay in la dhiso Guddiga Doorashada Madaxweynaha Jubbaland
Xildhibaan difaacay Ciidanka ay Dowladda Federaalka geysay Cadaado iyo Caabud-waaq